WEERARYAHAN mise DAAFAC: Sergio Ramos oo Xalay dhaliyay goolkiisii 100-aad – Gool FM
GRAF582. MADRID, 03/11/2018.- El defensa del Real Madrid Sergio Ramos celebra el segundo gol de su equipo ante el Real Valladolid, en partido de la undécima jornada de liga en Primera División que se disputa esta tarde en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Fernando Villar
(Madrid) 10 Jan 2019. Sergio Ramos ayaa xalay dhaliyay goolkiisii 100-aad ee waayihiisa ciyaareed kaddib rigooradii uu u dhaliyay Real Madrid ciyaartii xalay ay 3-0 uga adkaadeen Leganes Copa del Rey.
80-ka mid ah goolasha wuxuu u dhaliyay Real Madrid, 3 uu u dhaliyay kooxdiisii hore ee Sevilla iyo 17-goo uu u dhaliyay xulkiisa Spain.
Kabtanka Spain iyo Los Blancos ayaa markii uu u dabaal degayay goolkiisa rigoorada xalay bixiyay tilmaam ah inuu gaaraya Boqol gool.
Aad ayay u yaryihiin daafacyo dhaliyay 100-gool ama ka badan oo wuxuu iminka Sergio Ramos daba bursanayaa inuu gaaro rikoodhka daafacyadii hore ee Ronald Koeman iyo Daniel Alberto Passarella kuwaa oo kala dhaliyay 193-gool iyo 134-gool.
Sergio Ramos ayaa goolkiisii ugu horreeyay dhaliyay sanadkii 2004, 16-ka bishii September markaa uu u ciyaarayay Sevilla.
Gabriel Jesus oo ka hadlay dareenkiisa kadib AFARTII gool uu ka dhaliyay kooxda Burton Albion